Akụkọ - Emeputa
KingTai Company bụ a sara mbara trading emeputa tụnyere mmepụta na sales.We nwere onwe anyị factory na esenidụt ahịa otu, anyị factory emi odude ke Hui Zhou City Guangdong Province.Our nkezi mmepụta ikike bụ karịa 300,000 PC kwa ọnwa.
Companylọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị afọ 20 na-ahụ maka ọrụ ọla.
Dị ka: baajị, opener, medals, keychain, souvenir, cufflinks, lapel pin, bookmark, wdg Ma anyị na-arụ ọrụ na ọtụtụ ama ika, dị ka: Harry ọkpụite, Disney, Wal-mart, Universal Studios wdg
Kemgbe ọ malitere, asambodo na patenti anyị nwetara karịa 30 iberibe, ọtụtụ n’ime ha bụ SOS, Sedex na ISO9001.
Anyị na-agbaso ngwa ngwa dị elu, ụkpụrụ dị elu iji chọọ onwe ha.Mgbe ha mechara usoro ọ bụla, anyị nwere ndị otu QC pụrụ iche iji chọpụta ma ngwaahịa ndị ahụ kwekọrọ na usoro ọzọ, iji hụ na ọnụego tozuru oke nke ngwaahịa.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ikike mmepụta zuru oke na ikike nchekwa. Na-abụkarị, mgbe ndị ọrụ QC anyị na-enyocha ngwaahịa ndị ahụ, ha ga-ahọrọ ngwaahịa ndị na-erughị eru ma hapụ ngwaahịa ndị ruru eru ịbanye usoro ọzọ. Mgbe ahụ, a ga-eweghachi ngwaahịa ndị a na-erughị eru na usoro gara aga maka refinishing.A n'otu oge ahụ, anyị nwere ohere iji chịkwaa ọnụọgụ nke ngwaahịa ndị a n'oge nyocha ahụ. Nke a dị ka ngwaahịa dị iche iche. Iji maa atụ, akara baajị anyị bụ 95%. Ozugbo ngwaahịa a na-erughị eru dị elu karịa nke a, anyị ga-emezigharị ngwaahịa ahụ erughị eru. Biko gwa anyị ma ọ bụrụ na ọnụego ị tụrụ anya ya bụ 98%, ka anyị wee nwee ike ịnye ọnụego ngwaahịa ahụ n'oge nyocha. Anyị nwere nnukwu nchekwa nchekwa na Gburugburu ebe obibi iji kwado nnukwu iwu. Biko mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na ịchọrọ mbupu akụkụ. Warelọ nkwakọba ihe anyị ga-elekọta nchekwa nke ngwongwo ahụ.
Taa bụ King Tai na-arụ ọrụ na ndị ahịa mbụ ọrụ nzube na abuana ke canton ngosi na hong kong ngosi. Ruo ọtụtụ afọ. Anyị na-enye ezi ọrụ maka ndị ahịa ma na-echekwa ihe ọhụụ na ihu ọhụụ mara mma.